Warmly Welcome: အဆင်မပြေတဲ့နေ့လေးများ
တချိန်မှာတော့ တံတိုင်းမကတဲ့ အရာအားလုံးကို ဖြတ်ကျော်
ဘ၀မှာ ဘာဆို ဘာမှ ခံစားမူမရှိတော့အောင် အပြင်းထန်ဆုံးခံစားဘူးတယ်..
အဲ့တုန်းကဆို အနာဂတ်မရှိ မျော်လင့်ချက်မရှိ မိုးလင်းမိုးချူပ် နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီး ဗလာဖြစ်နေတဲ့ ရင်ဘတ်ကို ခဏခဏ ငုံကြည့်မိတယ်..
မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သလို ဖြစ်သွားပေမယ့် အကြောင်းမဲ့ လန့်လန့်နိုးလာပြန်တယ်။။။အဲ့တုန်းကဆို တကယ့်ကို ဟာလာ ဟင်းလင်းပဲ..(ဒါတောင် လေးဘက်နံရံတွေကြားထဲ ညှပ်နေခဲ့တာနော်.).ထပ်တူခံစားပေးနိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်း သုံးထားတာ သိပ်ုကိုက်တယ် လတ်တလော အဆင်မပြေမူလေးတွေဆိုတာလေ ဟုတ်တယ် အဲ့တာ အမှန်ပဲ နောက်ထပ် ပိုဆိုးတာတွေ ရှိလာဦးမှာပဲ လူ့လောကထဲမှာ နေရေရသေးသရွေ့ အသက်ရှင်နေရသေးသရွေ့ ပေါ့...ငြိမ်းချမ်းပါစေနော်...
အမှန်ပဲဗျ။ အရေးအသားတွေန ညက်ညောပါတယ် ။
အစဉ်အားပေးလျက်ပါဗျာ ။ ခံစားနေရတာတွေ အမြန်ပြီးဆုံး
ပါစေလို ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။
ဒီလိုပါပဲ အဆင်မပြေတာတွေလည်းရှိ အဆင်ပြေတဲ့နေ့တွေလည်း ရှိမှာပေါ့..
ရေးထားပုံက အတူတောင် လိုက်ပြီးဆို့နင့်နင့်ဖြစ်သွားတယ်
လာဖတ်တယ်။ အိပ်မပျော်တာက အချစ်ကြောင့်လား၊ အကြွေးကြောင့်လား။ ဟ ဟ .. စ တယ်ဗျာ။
နောက်တခုရှိသေးတယ်၊ ကိုယ့် ကွန်ပြူတာက အင်တာနက်လိုင်းပေါ် မတက်နိုင်ရင်၊ ဒီလိုပဲ ဖြစ်တတ်တယ်။
အကြံဥာဏ်တွေပေးတဲ့ ပိုစ့်ကို တင်ခဲ့တာ
မို့လား---ကျမ တောင် ကိုဝင်းဇော်ဆီက
ဘယ်လိုလဲရှင်---- ကိုယ်နည်းကိုယ် မလုပ်
အမောင် ၀င်းဇော် ဘောက်မဲ့ကြောင့် အနှီ အုတ်တံတိုင်းကို
အပင်ပန်းခံ တိုးဝှေ့ နေဘိသနည်း? အမောင့်ခေါင်းသာ နောက်ဆုံး ကွဲဖို့တာ များတော့သည်။ စဉ်းစားပါဦးတော့လား
အုတ်တံတိုင်းကို မတိုးလေနှင့် ခုန်ပျံ ကျော်လွှားဖို့ စဉ်းစားပါ
တော့လား။ အမောင် အိပ်မရလျင်ဖြင့် လူပျံတော် လှမ်းလျှောက်ကိုတာ အဖော်ပြု၍ အိပ်ပါလေ။
စာရေးကောင်းလိုက်တာ....အရေးအသားကို အားကျတယ် ကိုဝင်းဇော်ရေ...အချစ်အတွက် အိပ်ပျက်မခံပါနဲ့....း)
အင်း... ဖတ်ပြီး ခင်ဗျား အိပ်မက်ထဲရောက်သလိုတောင် ခံစားသွားရတယ်။
ယခုကဲ့ သို.အဖော်ရှိသည့်အတွက် ၀မ်းသာပါကြောင်း အတင်းအိပ်ရန်ကြိုးစားပမ်းစား ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဗျို.။